IPhone 7 Plus pfungwa ine vaviri vatauri uye USB-C | IPhone nhau
IPhone 7 Plus Dual Kamera Concept
Nehurombo, Apple haina kuchengeta chakavanzika chekuti iPhone ichaita sei isati yatangwa kwenguva yakareba. Tiri muna Chivabvu, mwedzi mina mushure mekuratidzwa kweiyo iPhone 7, uye isu tatoziva chero zvese nezve inotevera smartphone paapuro, senge iyo iyo iPhone 7 Plus ichave iine mbiri kamera. Chinhu chakanaka pamusoro pekuziva kuti zvese zvichave zvakaita sei isati yatanga, kutaura zvishoma, ndechekuti isu tinogona kuona concepts mwedzi yakawanda yakatendeka usati waona mudziyo chaiwo.
Pfungwa iyo iwe yaunogona kuona pazasi yakaitwa naJermaine Smit kubva kune runyerekupe nekudonha kwatave tichigamuchira mukati memwedzi yapfuura. Pfungwa yayo inosanganisira iyo kamera kameral yeiyo iPhone 7 Plus (kana Pro, hazvizivikanwe) iine rimwe lenzi rakakura kupfuura rimwe, seizvo Taona mune mamwe mapikicha akaburitswa eiyo kamera module, uye akagadziriswazve antenna mitsetse, chete iwo ari kumusoro uye ezasi mativi eiyo iPhone aripo. Zvinondirova kuti iyo kamera nzvimbo iri kurudyi uye kwete kuruboshwe sezvayakange iri kubvira pakatangwa iyo yekutanga iPhone.
Pfungwa ye iPhone 7 Plus yataigona kuona munaGunyana
Iko kunopotsa Smit, kunyangwe isu tichizoda, kuri pazasi pezano rake: izvi iPhone 7 Plus Iyo ine ma speaker maviri, chimwe chinhu chingavandudze ruzha zvakanyanya asi izvo zvinoita sekunge hatichazviona gore rino, uye chiteshi USB-C, izvo zvingave zvirinani kune wese munhu (kunze kweApple) nekuti isu tinogona kushandisa chichava chakaringana chiteshi mune yepakati-term ramangwana. Izvo zvakanaka pazasi pechimiro chayo ndechekuti haina kusanganisira 3.5mm jack chiteshi chemahedhifoni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone Concepts » IPhone 7 Plus pfungwa ine vaviri vatauri uye USB-C
vanhu vanochemera tekinoroji iyo android yatove nayo? pfungwa dzandinoona padandemutande dzese dzino tarisa pazvinhu izvo HTC LG SONY yatove nezvimwe etc ....
Ngatione zvinobuda muchoto cheapuro
Zvinobvunzwa nevanhu mabhuru! Padanho rino isu tinopedzisira tave nenharembozha munzira yemota yakagadzirirwa naHomer Simpson !!!